प्रचण्डले भनेः केपीजी निसन्तान हुनुभयो, उहाँको दोष हो ? (भिडियोसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रचण्डले भनेः केपीजी निसन्तान हुनुभयो, उहाँको दोष हो ? (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : ६ माघ २०७७, मंगलबार
काठमाडौं, ६ माघ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै निसन्तान हुनु दोष नभएको बताएका छन् । उनले आफू निसन्तान नहुनु पनि दोष नभएको बताएका छन् ।
‘म निसन्तान भइनँ मेरो दोष हो । केपीजी निसन्तान हुनुभयो, छोराछोरी भन्न परेन भने उहाँको दोष हो र ?’ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग विशेष अन्तवार्ता दिदै प्रचण्डले भने । ओलीले प्रचण्डले परिवारलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर कदमहरु चालिरहेको आरोप लगाउँदा प्रचण्डले यस्तो भनाई सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रचण्डले आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको राजनीतिमा ठुलो योगदान भएको स्मरण गराए । ‘युद्धका बेलामा मर्न हिंडेका होइनन् र ? जेलनेल यातना भोगेर आएका हुन् र ? क्रान्तिमा सबै होभिए त्यो मेरो दोष हो,’ उनले भने,‘भैरवनाथ गणमा तीन वर्ष लापता भएर यातना खाएर बसे । रोल्पा रुकुमका भीरपाखामा कुदे मेरा छोरीहरु ।’ उनले आफूले युद्धमा छोराछोरीलाई विदेशमा पढ्न नपठाएको समेत बताए ।
ओलीले आफूलाई सिध्याउने उद्देश्यमा अहिलेको कदम चालिरहेको आरोप लगाए । उनले ओलीमाथि जालझेल र षड्यन्त्रको आरोप लगाए । उनले भने,‘केपीजीको एकमात्र उद्देश्य प्रचण्डलाई सिध्याउने रहेछ ।’ प्रचण्डलाई सिध्याउनका लागि गणतन्त्र नै सखाप पार्न खोजेको आरोप लगाए ।
संविधानलाई कुल्चने काम भएको र हत्या नै गर्न खोजिए देश अराजकताको भुँमरीमा फस्ने खतरा औल्याए । आफू मूलधारको राजनीतिमा आइसकेको तर ओलीको कदमविरुद्ध विद्रोह गर्नेहरु अरु निस्कने र त्यसलाई दमन गर्न खोज्दा अराजकता निम्तनसक्ने बताए । उनले भने,‘संविधानको हत्या गर्ने कार्य भएमा नेपाल फेरि अराजकताको सुरुङभित्र पस्यो ।’
ओलीले देशमा राजा नफर्कने बताए । राजावादी सलबलाएको प्रश्नमा उनले भने,‘सलबलाउनेहरु सलबलाइरहन्छन्, इतिहासको चक्का पछाडि फर्कदैन ।’ उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाइने बताए । आफूमा आवेग र आक्रोश भएको बताए । उनले धेरै सघर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्रको शिशुको हत्या गर्न खोजिए सहन नसक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कमल खोलाको पुल उद्घाटन
झापा, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कमल गाउँपालिका वडा नं २ स्थित
चैनपुरमा खानेपानीको हाहाकार
बझाङ, १६ फागुन । सदरमुकाम चैनपुरमा दुई सातादेखि खानेपानीको हाहाकार भएको छ । खानेपानीको पाइपको
अदालतलाई धम्की नदिएको प्रचण्डको जवाफ
काठमाडौं, १६ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले
काठमाडौं, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेकपा एमाले ब्युँताउने चाहना विगतमा नै देखिएको
प्रधानमन्त्री ओली किन धमाधम शिलान्यासमा सक्रिय
काठमाडौं, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धमाधम भौतिक निर्माणका क्षेत्रहरुको शिलान्यासमा सक्रिय भएका
नेकपा कानुनी रुपमा अलग नभएसम्म सत्ता समिकरणको कुरा हुँदैनः राजेन्द्र महतो
काठमाडौं, १६ फागुन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नेपाल कम्युनिस्ट
झापा पुगेर के बोल्दैछन् ओली ?
काठमाडौं, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहजिल्ला झापा पुग्दैछन् । उनी औद्योगिक क्षेत्र
अहिले कांग्रेस सत्ताको पछिलागे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छः प्रदीप पौडेल
काठमाडौं, फागुन १६ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले अहिलेको राजनीतिक निकास कांग्रेसले मात्र